Izithintelo zokuHamba zaMazwe kunye neMimandla ngokwe-UNWTO
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ISpain Iindaba Eziphambili » Izithintelo zokuHamba zaMazwe kunye neMimandla ngokwe-UNWTO
Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
INgxelo yoThintelo loKhenketho kuMbutho weHlabathi weZizwe eziManyeneyo wezoKhenketho (UNWTO)
I-UNWTO isemva kwamaxesha sele ikhuphe ingxelo entsha kraca kwiZithintelo zokuHamba zaMazwe kunye neMimandla namhlanje. Iqabane le-UNWTO lophando linikezela ngencwadana eyilwe kakuhle abafundi be-eTN banokuzikhuphelela.
Ingxelo entsha kraca ibonisa imeko eyinyani ngoJuni 1. ngaphezulu kwenyanga ephelileyo nangaphambi kwenguqulelo ye-Delta ye-COVID-19 iphinde yahlasela umhlaba wokuhamba nokhenketho
"Izithintelo zokuHamba zaMazwe kunye nezeMimandla zitshintsha rhoqo, kwaye ingxelo eshicilelweyo ye-UNWTO kaRhulumente ayizukukwazi ukuyifumana ngexesha elifanelekileyo", utshilo uJuergen Steinmetz, usihlalo weWorld Tourism Network (wtn.travel)
Ngokwoshicilelo olutsha lweZithintelo zokuHamba zaMazwe kunye neNgxelo yeNgingqi evela kwi I-arhente yeZizwe eziManyeneyo ekhethekileyo kwezokhenketho, ukusukela nge-1 kaJuni, i-29% yazo zonke iindawo ekuyiwa kuzo kwihlabathi liphela imida yazo ivaliwe ngokupheleleyo kukhenketho lwamazwe aphesheya.
Kwezi, ngaphezulu kwesiqingatha sivalwe ngokupheleleyo kubakhenkethi ukusukela ngoMeyi 2020 okanye nangaphezulu, uninzi lwala mazwe aseMazantsi eSiqithi seAsia kunye nePacific.
Ngokuthelekisa, zintathu kuphela iindawo (eAlbania, Costa Rica, Dominican Republic) zivuleleke ngokupheleleyo kubakhenkethi, ngaphandle kwezithintelo ezikhoyo ngoku.
Ukukhutshwa kwesitofu sokugonya sehlabathi kunye nokwandiswa kokwamkelwa kwezisombululo zedijithali zokuhamba ngokukhuselekileyo kufanele kukhokelele ekunyukeni kokuhamba kwamazwe aphesheya kwezi veki neenyanga ezizayo, idatha yokugqibela evela kuMbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) ibonisa.
Inye kwisithathu (34%) yazo zonke iindawo ekuyiwa kuzo kuvaliwe, yaye 36% Cela isiphumo esibi se-COVID-19 xa ufika, kwezinye iimeko ngokudibeneyo nemfuno yokuvalelwa yedwa. Idatha iqinisekisa imeko yokuya kwiindawo ezamkela ngakumbi ukungalunganga, Indlela esekwe kubungqina kunye nomngcipheko esekwe kuthintelo kuhambo, ngakumbi ekukhanyeni kwemeko yezifo ezikhulayo kunye nokuvela kweenguqulelo ezintsha zentsholongwane. Ewe, iipesenti ezingama-42 zazo zonke iindawo ziye zazisa izithintelo ezithile kubakhenkethi abasuka kwiindawo ekuya kuzo kunye nezinto ezixhalabisayo ukusukela ekunqunyanyisweni kweenqwelo moya kunye nokuvalwa kwemida kuye yedwa.
Izithintelo zokuHamba zaMazwe kunye neMimandla zinokwahluka kakhulu kwaye zitshintshe nanini na. Ingxelo ye-UNWTO ekhutshiweyo ingaphezulu kwenyanga, kwaye iinguqu ezinkulu sele zenzekile kwaye kufuneka ziphandwe ngabahambi kunye neengcali zokuhamba.
Cofa apha ukukhuphela ingxelo epheleleyo. (PDF)
Ukongeza, kuba uninzi lwezo ndawo zinamanyathelo angqongqo zinamaqondo asezantsi kakhulu kugonyo, idatha ikwabonisa unxibelelwano phakathi kwesantya sokugonya kunye nokwenza lula izithintelo. Xa kuthelekiswa, ezo ndawo zinamazinga aphezulu okugonya nalapho amazwe akwaziyo ukusebenza kunye imithetho ehambelanayo kunye neenkqubo njengaleyo iqeshiweyo kwindawo yaseSchengen ye-European Union, zibekwe ngcono ukuvumela ukhenketho lubuye kancinci.
Umahluko wengingqi ngokubhekisele kuthintelo lohambo usahleli. I-70% yazo zonke iindawo eziseAsia nasePacific zivaliwe ngokupheleleyo, xa kuthelekiswa ne-13% kuphela eYurophu, kunye ne-20% eMelika, 19% eAfrika, kunye nama-31% kuMbindi Mpuma.
Ukuvavanya iimfuno ezikhoyo ngoku ze abakhweli abagonyiweyoI-17% yazo zonke iindawo ekuyiwa kuzo kwihlabathi liphela zikhankanya abagibeli abagonyelweyo kwimigaqo yabo. Kwiimeko ezininzi, izithintelo zokuhamba ziyaqhubeka nokufaka kubakhweli abagonywe ngokupheleleyo (abafumene iidosi ezimbini zesitofu esivunyiweyo), nangona, kwezinye, zonke izithintelo zisuswe. I-UNWTO ilindele ukuba oku kuya kuguquka kakhulu kwezi veki zizayo.
Ingxelo ibonisa ukuba ukuqala kwakhona kokhenketho lwehlabathi kuya kuhlala kuthulisiwe okoko oorhulumente beqhubeka nokucebisa. Ezine kwezili-10 zemithombo yentengiso ephezulu ziyaqhubeka nokucebisa abemi bazo malunga nokuhamba okungabalulekanga kwamanye amazwe (ezi zine zivelise iipesenti ezingama-25 zabo bonke abafikayo bamanye amazwe ngo-2018).
Ingxelo ye-UN yezithintelo zohambo Khuphela mahala (PDF)
UDmytro Makarov ngowase-Ukraine, uhlala e-United States phantse iminyaka eli-10 njengegqwetha langaphambili.